Ma kufsi baa, haddii qof dumar ah ay nin xoogto? - BBC News Somali
"Fadhiga ayaan joogay; Jikada ayey ka soo baxday feer ayayna iiga dhufatay sanka wayna qososhay," ayuu yiri John. "Dhibaatada joogto ayey noqotay".
Markay guriga ku soo noqoto oo shaqada ay ka timaado "way i xoogi jirtay markasta", ayuu yiri.
"Waxay gaartay xaalad xun, ilaa aan arkay anigoo ka baqaya, marka ay shaqada ka timaado."
Wuxuu yiri "waxay igu qasabtay inaan liqo kaniinka dareenka kiciya".
"Wax kale oo aan sameyn karay majiro," ayuu sheegay.
"Ka dib waxaan aaday musqusha, waxaana iska hoos fariistay shaawarka... xoogaa ka dib, waxaan aaday hoos. Waxa ugu horreeyay ee ay igu tiri wuxuu ahaa, 'maxaa lagu casheynayaa?'"
"Walaalkey ayaa 5 sano i kufsanayay"
Markii John uu damcay inuu dadka kale uga sheekeeyo, wuxuu la kulmay aaminad la'aan, sida uu sheegay.
"Waxay dadka iweydiiyeen sababta aanan guriga uga bixin. Haddab, wuxuu ahaa gurigii aan caruurteyda u iibin lahaa. Dhanka dhaqaalahana, waxaan u xirxirnaa xiriirkaas," ayuu yiri.
"Weli waan aamini la'ahay, waxayna la mid ahayd, "Maxaad isaga celin weyday?' marar badan ayaa la iweydiiyay. Marka, taas wey fududahay in la iska dhoho, balse way adag tahay in la sameeyo.
"Waxaa fiicnaan lahayd inaan xilli hore ka cararo meesha."
"Waad ku raaxeysaneysay, haddii kale waxay ahayd in aad booliska ku wargeliso si degdeg ah," nin ayaa sheegay in hadalkaas uu kala kulmay booliska.
Nin kale ayaa yiri: "Waan ka baqeynaa inaan ka hadalno, waana ceeb. Markaan ka hadalno nalama rumeysanayo, sababtoo ah, rag beynu nahay!. Sidee nin rag ah loogu xadgudbi karaa? Eeg waa nin."
Ragga markasta waalagu ceebeystaa inay ka hadlaan in la kufsaday - Waa suuragal inay ka hadlaan xadgudubka kale, iyagoon soo hadal qaadin kufsi.
Ragga qaar waxay ka sheekeeyeen in si joogto ah dhib loogu geystay - Qaar kood iyagoo ilma ah ayaa la kufsaday, qaarna waxay xadgudub kala kulmeen dad kaladuwan oo rag ay ka mid yihiin
Hal arrin oo "khuraafaad" ah oo baaritaanka Weare lagu beeniyay waxaa ka mid ah in qof rag ah la kufsado in ay tahay arrin aan dhici karin, sababtoo ah ragga way ka xoog badan yihiin dumarka. Khuraafaadka kale wuxuu yahay in "ragga ay wax wanaagsan u arkaan fursad kastoo qof dumar ah ay ugu tagi karaan.
"Dareenka ragga wuu kici karaa xitaa haddii ay baqayaan, xanaaqsan yihiin ama xanuun ay dareemayaan," ayey tiri.
"Waxaa kaloo jirto cilm-baaris muujineysa in dumarka xitaa ay wax dareemayaan marka la kufsanayo, sababtoo ah jirkooda ayaa jawaab bixinaya. Tani waa xaaladda rag iyo dumarba ee aan si wanaagsan looga hadlin, balse cadeyn muuqata loo hayo."
Dhallinta hanaqaaday oo "hammadooda ay hoos u dhacday"
Weare waxay sheegtay, inta badan dadka ka qeybgalay cilmi-baarista ugu dambeysay in qasabka ragga ay u arkaan "kufsi", qaarna waxay ka walaacsan yihiin in arrintan aysan ku qorneyn shuruucda dalal badan, sida UK.
Sidoo kale wuxuu walwal ka jiraan in dad badan aysan arrintan u garankarin in ay "kufsi tahay".
Mid ka mid ah siddeeda talo ee la soo jeediyay waxay tahay in isbedel lagu sameeyo sharciga Kufsiga iyo qasabka iyo in arrintaas "si dhab ah loo qaato".
Mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay dumar lagu haysto guryo ku yaalla Muqdisho
1 Oktoobar 2018
Neymar oo ka jawaabay kufsi lagu eedeeyay